Hagaajinaha Aaga-Imaanshaha - Rosemount-Apple Valley-Eagan ISD 196
MACLUUMAADKA QOYSKA OO LA CUSBOONAYSIIYAY
Isbeddellada waxay raadinayaan inay yareeyaan ciriiriga hadda iyo mustaqbalka ee dugsiga sare iyo dhexe ee Rosemount
Degmada 196 in la hagaajiyo aagga ka -qaybgalka dugsiga sare si loo bilaabo fududeynta ciriiriga hadda jira iyo saadaasha ee Dugsiga Sare ee Rosemount iyo Dugsiga Dhexe ee Rosemount iyadoo si buuxda looga faa'iideysanayo boosaska jira ee dugsiyada kale ee degmada.
Qoysaska ku nool aagga ay saamaysay hagaajinta aagga ka-qaybgalku waxay heli doonaan warqad boostada ah oo ka socota degmo dugsiyeedka. Guddida dugsigu waxay ansixiyeen waxka bedelka Diisambar 13. Wixii macluumaad ku saabsan isbeddellada la ansixiyay, tag www.district196.org/about/attendance-area-adjustments
Waxaa jira doorbidis walaalnimo oo loogu talagalay ardaydu inay iska diiwaan geliyaan dugsi ay isku mar dhiganayaan walaal ka weyn. Waxa kale oo jira doorbid qoys oo loogu talagalay ardayda walaalo ka weyn oo ka qalin jabiyay ama ka qalin jabin doona Rosemount High. Qoysaska ku nool aaggan ardayda hadda dhigata fasallada K-7 ee aan lahayn doorbid walaal ama qoys waxa la siin doonaa door bid habka beddelka degmooyinka hoose ee kuwa kale ee aanay saamaynayn isbeddelladan ka-qaybgalka. Booqo www.district196.org/about/policies/500-students/502/5024p Si aad u soo dejisato codsi.
Qoysaska yeelan doona ardayda dugsiga dhexe iyo/ama dugsiga sare sannad dugsiyeedka soo socda waxay haystaan ikhtiyaarrada diiwaangelinta ee 2022-23, laakiin waa inay go'aansadaan Janaayo 5 kama dambaysta ee soo gudbinta codsiyada beddelka ardga ee degmo dugseyeed kale.
Ardayda fasalada 6, 7, 9, 10 iyo 11 ee hadda dhigta dugsiga dhexe ama dugsiga sare waxay ku sii jiri doonaan diiwaan gelinta dugsigaas 2022-23 iyaga oo aan wax tallaabo ah qaadin. Si ay u dhigtaan ka qaybgalkooda cusub ee dugsiga dhexe ama dugsiga sare, qoysaska leh ardayda fasaladan waxay u baahan doonaan inay buuxiyaan foomka Codsiga Bedelka Ardayga Degmo Dugsiyeed Kale (502.4P).
Ardayda fasalka 8 hadda waxa lagu diwaangelin doonaa dugsigooda sare ee degaanka cusub ee 2022-23. Si ay u gutaan dookhdooda ah in ay dhigtaan Dugsiga Sare ee Rosemount, qoysaska ardayda fasalka 8aad waxa ay u baahan doonaan in ay buuxiyaan foomka Codsiga Bedelka Ardayga Degmo Dugsiyeed Kale (502.4P).
Ardayda fasalka 5 hadda waxa lagu diwaangelin doonaa dugsigooda dhexe ee degaanka cusub ee 2022-23. Haddii ardaygu u qalmo doobid walaalaha ama qoyska oo uu rabo inuu dhigto dugsiga dhexe ee degaanka uu hadda joogo, waa inay buuxiyaan foomka Codsiga Bedelka Ardayga ee Degmo dugsiyeed kale. Sidoo kale, ardayda wax ku baranaysa Mandarin Chinese ee Diamond Path Elementary oo raba inay ku sii wataan Dugsiga Dhexe ee Scott Highlands waa inay buuxiyaan foomka Codsiga Beddelka Dugsi Degmo. Codsiga Bedelka Ardayga Degmo Dugsiyeed Kale (502.4P)
Dugsiga Sare ee Rosemount wuxuu awood u leeyahay ku dhawaad 2,115 arday, isqorista hadda waa 2,445. Fasalka sanadka cusub ee Rosemount waa in ka badan 675 arday waxaana isdiiwaangalinta guud ee dugsiga la saadaalinayaa inay korodho 2,660 saddexda sano ee soo socota, 545 marka loo eego awooda hadda jirta.
Dugsiga Dhexe ee Rosemount wuxuu awood u leeyahay ku dhawaad 1,180 arday, isqorista hadda waa 1,220. Diiwaangelinta ayaa la saadaalinayaa inay ku korodho 1,335 arday saddexda sano ee soo socota, 155 ayaa ka badan awoodda hadda jirta.
Hagaajinta aagga imaanshaha ayaa dhaqangalaya laga bilaabo sannad dugsiyeedka 2022-23 dayrta soo socota. Sababtoo ah dhaqan iyo xiriir adag oo lala yeesho bulshooyinka dugsiga, maamulku wuxuu ku talinayaa hirgelinta weji leh oo qoysasku ay kala dooran karaan inay iska diiwaangeliyaan dugsigooda cusub ee aagga xaadirinta ama ay ka sii diiwaangashan yihiin aagga xaadiriska xaadirkooda illaa dhammaadka heerkaas. Gaadiidka waxaa la siin doonaa midkood dugsiga dhexe labada sano ee soo socota, illaa sannad dugsiyeedka 2023-24, iyo midkood dugsiga sare afarta sano ee soo socota, illaa sannad dugsiyeedka 2025-26.
Afarta isbeddel ee la ee dugsiga sare ayaa u wareejin doona qeybaha ugu sarreeya aagga xaadiritaanka Dugsiga Sare ee Rosemount ilaa saddex dugsi sare oo kale - Apple Valley, Eagan iyo Eastview. Waxaa jira 600 arday oo dugsi sare ee Degmada196 ah oo hadda ku nool afartan aag oo la isku daray, badankoodu waxay dhigtaan Rosemount High.
Afarta isbeddel ee dugsiga dhexe ee ayaa u wareejin doona qaybo ka mid ah aagga ka -qaybgalka Dugsiga Dhexe ee Rosemount una wareejinaya dugsiyada dhexe ee Dakota Hills iyo Scott Highlands, iyo qaybo ka mid ah aagga ka -qaybgalka Scott Highlands ee Falcon Ridge iyo Valley dhexe. Waxaa jira 380 arday oo dugsi sare ee Degmada196 ah oo hadda ku nool afartan aag oo la isku daray.
Talooyin hordhac ah
Jaantusyada hoose waxay muujinayaan isbeddelada soo socda
Dhammaan Inver Grove Heights iyo qayb yar oo Eagan ah oo hadda ku sugan Dugsiga Sare ee Rosemount iyo aagagga ka -qaybgalka Dugsiga Dhexe ee Rosemount waxay u guuri doonaan Dakota Hills Middle School iyo Eagan High School. (Aagga #1 ee khariidada HS iyo khariidada MS)
Geeska geeska waqooyi -bari ee magaalada Apple Valley ee Scott Highlands/Rosemount dhexe iyo aaga Sare ee Rosemount ka qaybgalka, oo ay ku jiraan xaafadda Huntington, Koorsada Golf -ka Valleywood iyo qayb yar oo ka mid ah xaafadda Evermoor oo ku taal Dooxada Apple, waxay u guuri doontaa Falcon Ridge Middle Dugsiga iyo Dugsiga Sare ee Eastview. (Aagga #2 ee khariidada HS iyo qayb ka mid ah Aagga #2 ee khariidada MS)
Qaybta soo hartay ee aagga xaadiritaanka Dugsiga Dhexe ee Scott Highlands ee waqooyiga 140 aad Street waxay kaloo u guuri doontaa Falcon Ridge Middle School waxayna sii ahaan doontaa Dugsiga Sare ee Eastview. (Qeybta kale ee Aagga #2 ee khariidada MS)
Koonaha koonfur -galbeed ee magaalada Rosemount iyo geeska waqooyi -galbeed ee Empire Township waxay ka guuri doontaa aagga ka -qaybgalka Dugsiga Dhexe ee Rosemount oo waxay u wareegi doontaa Dugsiga Dhexe ee Scott Highlands waxayna sii ahaan doontaa Dugsiga Sare ee Rosemount. Aagga waxaa xuduud la leh Waddada County 42 iyo 155 th St. W. dhanka woqooyi, Jidka 3 ee bariga, Jidka Diamond ee galbeedka iyo xadka degmada ee koonfurta. (Aagga #3 ee khariidada MS)
Geesta koonfur -galbeed ee Dugsiga Dhexe ee Scott Highlands iyo Rosemount Dugsiyada Sare ee xaafadaha Lakeville/Valley Park waxay u guuri doontaa Dugsiga Dhexe ee Dooxada STEM iyo Dugsiga Sare ee Apple Valley. Aagga waxaa xuduud la leh Waddada County 46 dhanka woqooyi, Jidka caleenta ee bariga, Cedar Avenue dhanka galbeed iyo Dodd Road dhanka koonfureed. (Aagga #4 ee khariidada HS iyo khariidada MS)
Waxaa xuduud la leh County Road 42 dhanka waqooyi, Pilot Knob Road oo bari ah, Galaxie Avenue iyo Foliage Avenue dhanka galbeed, iyo xadka degmada dugsiga ee koonfurta. (Aagga #3 ee khariidada HS)
Hagaajinaha Aaga-Imaanshaha Dugsiga Sare
Hagaajinaha Aaga-Imaanshaha Dugsiga Dhexe